IGcokama engozini yemoto - kushone abathathu | isiZulu
Babalelwa kwabangu-9 abashone kugingqika itekisi
Durban - Amaphoyisa aseqinisekisile ukuthi kushone abantu abathathu engozini enyantisa igazi eyehlele isilomo somculi kamasikandi, uMthandeni "iGcokama Elisha" Manqele(29) endaweni yaseVryheid ngaseHlobane maphakathi neKwaZulu-Natal ngeSonto.
Lo mculi udabuka eHluhluwe enyakatho neKwaZulu-Natal kanti kuthiwa kwenzeka lengozi nje ubehamba ngemoto yakhe iToyota Quantum nezisebenzi zakhe (amagidangoma) ezingaphezulu kwesithupha ngesikhathi etholana phezulu nenye imoto encane kuyona lendawo.
Kubikwa ukuthi ubelibangise eGoli kanti ingozi yona yenzeke kusihlwa ngezithuba zehora lesi-11 ebusuku.
Ngokusho komthombo weLANGA iGcokama Elisha lingeniswe esibhedlela khona izolo namagidangoma alo ngenxa yokuthi isimo besibucayi. Uthi kukhona abashonile emotweni okuyiyona eshayisane neQuantum yalo mculi.
"Angisazi isibalo sabantu abashonile kodwa bangaphezulu koyedwa. Le ngozi cishe yaqeda ngezimpilo zabo ngoba nemoto yalo iGcokama ivele yaba iqashana ngenxa yokulimala kanzima kwazise ishayise yase iphenduka yabheka phezulu," kusho umthombo.
Izimpukane eziluhlaza zithi iGcokama Elisha belingenayo imvume egunyaza ukuthi lingagibeza abantu lishayele iQuantum nakuba ingakaveli imbangela yengozi.
Okhulumela abalandeli balo mculi, uMnu Dlukula Ntombela, uthi akanalo ulwazi ngale ngozi kodwa isimo sabo kasisibi kakhulu ngokuthola kwakhe.
"Ngizamile ukubafonela kwasho ukuthi izingcingo kazingeni kodwa ngitholile ukuthi kungenzeka bakhishwe kusasa ngoLwesibili esibhedlela," kusho uMnu Ntombela.
Iphoyisa elingagunyaziwe ukukhuluma nezindaba lithi kushone ingane encane endaweni yesigameko kanti omunye wesifazane ushonele esibhedlela.
Okhulumela amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Thulani zwane uthi usalindele umbiko esiteshini samaphoyisa eHlobane.
Lo mculi usanda kutshela leli phephandaba ukuthi ngenxa yokudayisa kahle kwe-albhamu yakhe "Amagolide," le quantum akayithenganga ngesikweletu.
Ithengwe ngenyanga edlule ihambisana neToyota Fortuner yohlobo olusha.